Alahady faharoa Paka – 12/04/2015 – Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Tamin’ny Alahady 05 Aprily isika no nankalaza ny nankalza ny Paka, izay nitsanganan’ny vatan’I Jesoa ho velona. Nandresy ny fahafatesana Tompotsika.
Fa ny lohahevitra atolotry ny fiangonana ho antsika izao dia “MAHERY NY FINOANA OMBANA FANANTENANA”. Nibahana sy hita taratra tamin’ireo vakiteny izany.
Te hamerina hamelona ny fanantenantsikafa indrindra ny finoantsika ny Evanjely. Tafatsanga-ko velona mantsy I Jesoa tamin’ny andro fahatelo, ary tsy voasakan’ny fotoana sy halavirana izany. Raha hazavaina dia nihidy tao an-trano ireo mpianatra, nihidy araka izany ny varavarana fa tafiditra tao ihany Jesoa nefa tsy nandalo ny varavarana rehefa niseho tamin4ireo apöstöly. Ary torak’izany koa ny niseho tamin’I Masina Maria, ny Fanahy Masina no niditra tao aminy fa izay ilay virjiny. Raha ampatsiahivina dia andro voalohany tamin’ny herinandro , izany hoe andro Alahady izay fivorian’ny mpianatra no niseho Jesoa. Nandritra ny fotoana nisehoany dia namerina ny teny hoe “Ho aminareo anie ny FIADANANA” in-telo Izy. Midika inona izany araka ny Evanjely?
Voalohany indrindra dia tsotra: te hampiombona antsika amin’ny Trinité Masina I Jesoa.
Faharoa manaraka, midika Fifaliana lehibe izany Fiadanana izany tamin’I Jesoa. Ary izany no naniraka ireo mpianany history eraky ny vazantany efatra. Tsy nahagaga I Thomasraha tonga hatrany Inde mihitsy nitory ny Vaovao Mahafaly ary maty tany. I Thomas ilay tsy te hino ny nandresen’i Jesoa ny fahafatesana raha tsy mikasika Azy. Saingy rehefa tena nifanatrika tamin’i Jesoa izy dia nino na tsy nikasika aza ary niteny hoe : “Tompoko sy Andriamanitro”. Ary tsy nila nitsapa an’I Jesoa araka ny teniny akory izy. Io tenin’I Thomas io dia fiekem-pinoana miezinenzina indrindra ao amin’ny Soaratra Masina.
Ary farany, ny teny hoe Fiadanana izay nataon’I Jesoa tamin’ireo mpianany dia manambara Finoana. Araka ny voalaza tetsy ambony dia io Finoana io no naniraka an’I Thomas hanaparitaka lavitra ny Evanjely. Ary araka ny vakiteny tao amin’ny Bokin’ni Md Joany dia maharesy an’izao tontolo izao ny Finoana; izany hoa mahafongotra ny fahotana sy ny haratsiana rehetra ihany koa. Vokany: nitombo ny isan’ny Mpino erak’izao tontolo izao. Ny mampalahelo anefa, mihamihemotra isika , tsy mifampitsinjo intso ary samy mangorom-pananana ka manadino ireo madinika.
Entanina isika hampiaina ny Fiadanana, indrindra ny Finoana eo amin’ny fiainantsikaaraka izany, fa tsy ampy ny teny sy ny fanononana ny Fiekem-pinoana any am-piangoanana fotsiny. Mila ezaka mafy sy hetaheta lalina avy amintsika rah ate hahita an’I Jesoa eo amin’ny fiainantsika andavanandro isika. Koa enganie hihamafy horina ny Finoantsika rehefa avy mamaky izao fandalinana izao ka hohita taratra eny amin’ny fiainantsika izany. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen
Alahady faha-efatra amin’ny Karemy – 15/03/2015 – Toriteny